" Kamakura" နှင်းအိမ်လေးထဲမှာ ဟော့ပေါ့စားကြမယ်။ - JAPO Japanese News
“ Kamakura” နှင်းအိမ်လေးထဲမှာ ဟော့ပေါ့စားကြမယ်။
ဟူး 09 Feb 2022, 12:22 ညနေ
“ Kamakura” လို့ခေါ်တဲ့ နှင်းအိမ်လေးထဲမှာ ဟော့ပေါ့ဟင်းလျာကိုစားကြမယ်။ နှင်းအရမ်းကျတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ Nagano စီရင်စုရဲ့ Iiyama မြို့ထဲမှာတော့ Restaurant Kamakura Village ဆိုတဲ့ရွာကလေးရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ရွာမဟုတ်ပါဘူး။ အပန်းဖြေစခန်းလိုပုံစံသာဖြစ်ပါတယ်။ ဟောဒီနှင်းတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ Kamakura နှင်းအိမ်လေးတွေဟာ အလုံးပေါင်း ၂၀ ရှိပါတယ်။
“ Kamakura” နှင်းအိမ်လေးထဲမှာ ဟော့ပေါ့စားကြပြီး၊ ၂ ရက် ၃ ရက်လောက် လာလည်ပတ်ကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေရှိပါတယ်။ ဒီလို Kamakura နှင်းအိမ်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ ဒေသခံစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်အဖြစ် နှင်းအလွန်ကျတဲ့ Nagano စီရင်စုမှာ နှင်းကိုပြန်အသုံးချမယ်ဆိုကာ Kamakura အားပေးရေးအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ မတိုင်ခင်ကတည်းက Kamakura နှင်းအိမ်တွေကိုဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့ ထိန်းသိမ်းခြင်းတွေကို လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။
အမြင့် ၃မီတာကျော်ရှိတဲ့ Kamakura ထဲမှာ၊ ဒေသထွက်ဂေါ်ဖီထုတ်နဲ့ မှိုတွေကို ပေါပေါလောလောစားနိုင်တဲ့ ဒေသထွက်အထူးဟော့ပေါ့ဟင်းလျာ ‘Noroshi Nabe’ နဲ့ ၎င်းမြို့ကနေထွက်တဲ့ နာမည်ကြီးဂျပန်ဆန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ Onigiri ကိုစားနိုင်ပြီး၊ ဖွင့်ဖို့ကိုစောင့်နေတဲ့ ဧည့်သည်တွေတောင် အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီအပြင် Kamakura နှင်းအိမ်လမ်းကလေးရဲ့အဆုံးမှာ အနီရောင် Torii နဲ့ Kamakura နတ်ကွန်းလည်းရှိပါတယ်။
ဒီနေရာဟာ အမြဲတမ်းဖွင့်လှစ်တာမဟုတ်ဘဲ ၁ လပိုင်း နောက်ဆုံးအပတ်ကနေ ၂ လပိုင်း နောက်ဆုံးအပတ်ထိ တစ်လကြာသာဖွင့်လှစ်ပါတယ်။ မသွားခင်တော့ ကြိုတင်စာရင်းပေးထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ‘Noroshi Nabe’ ကိုစားနိုင်မယ့် အစားအသောက်အစီအစဉ်နဲ့ အချိုပွဲအစီစဉ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
ချစ်စရာကောင်းပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးနိုင်တဲ့ ဒေသအထူးထုတ်ကုန်အသစ် !!!!
အိုလံပစ်အားကစားပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားရဲ့ ပြဇာတ် (Kabuki) ဖြစ်တဲ့ “ Shibaraku” ရဲ့ဇာတ်က ဘယ်လိုအကြောင်းလဲ?
ဘုန်းကြီးကမှည့်ပေးတဲ့ ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ ကလေးနာမည်…
ဝင်ငွေနည်းလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား? နေအိမ်မှာပဲ Shiitake မှိုစိုက်ပါ။
ဂျပန်လူမျိုးတွေ အသုဘပွဲတွေမလုပ်တော့ဘူးလာ? သင်္ချိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးလာ?